Tenders | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
“ မြရွှေစင် စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်” မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
Published: Fri, 08/21/2020 - 13:41
Last Date : Fri, 08/21/2020 - 13:44
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမာန်အသုံးစရိတ် ငွေဖြင့် စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင် စစ်တွေ အခြေပြု ရေယာဉ်များ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ဒီဇယ်ဆီ(၂၄၀၀၀)ဂါလံကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ၌ “မြရွှေစင် စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်” မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
Tender_21-8-2020.jpg (2.12 MB)
Tender_21-8-2020.pdf (822.24 KB)
Department Under : ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ တင်ဒါအမှတ်စဉ် (ITCSD - ၂၆/၂၀၂၀)
Published: Fri, 06/26/2020 - 14:49
Last Date : Mon, 07/06/2020 - 14:00
Tender Advertisement (26/2020) (115.59 KB)
Department Under : သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန
Published: Thu, 06/25/2020 - 13:28
Last Date : Thu, 06/25/2020 - 13:28
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမာန် အသုံးစရိတ်ဖြင့်ကစ္ဆပနဒီ-၃ ရေယာဉ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်ဆီ/ချောဆီ (၅)မျိုးကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရာ Shwe Taung Tet Myanmar Co.,Ltd မှ မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
Published: Thu, 06/25/2020 - 13:26
Last Date : Thu, 06/25/2020 - 13:27
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမာန် အသုံးစရိတ်ဖြင့် ကစ္ဆပနဒီ-၃ ရေယာဉ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်ဆီ/ချောဆီ (၅)မျိုးကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရာ AKT Holding Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
Published: Wed, 04/08/2020 - 11:24
Last Date : Wed, 05/20/2020 - 13:30
Ministry of Transport and Communications(MoTC) now invites eligible firm to submit the proposal for “Spectrum Analyzer ”as part of the Telecom Sector Reform Project supported by the World Bank’s Loan. The deadline for submission of RFQ is May 20th , 2020 by 13:30 PM (Myanmar Standard Time).
Posts and Telecommunications Department.
Ministry of Transport and Communications Office Building Number (2), Nay Pyi Taw, Myanmar.
Telephone: +95 67 3407225
Facsimile number: +95 67 3407216
The detail information and requirements can be seen in the Request for Quotation (RFQ)and it can be downloaded at PTD Website: https://www.ptd.gov.mm.
Portable Spectrum Analyzer(RFQ) (263.89 KB)
RFQ Guideline (27.78 KB)
Department Under : ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန